Dagaalo Lagu Hoobtay Oo Maanta Ka Dhacay Magalada Muqdisho Iyo Madaafiicda AMISOM Oo Khasaare Weyn U Geystay Dadka Rayidka Ah | Araweelo News Network (Archive) -
Dagaalo Lagu Hoobtay Oo Maanta Ka Dhacay Magalada Muqdisho Iyo Madaafiicda AMISOM Oo Khasaare Weyn U Geystay Dadka Rayidka Ah
Muqdisho(ANN) agaallo culus oo khasaare weyn geystay ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho. Dagaalada oo u dhexeeya xoogaga Islaamiyiinta ee isbahaysiga Al-shabaab iyo xisbul islaam,
iyadoo dhinaca kalena ay kasoo jeedaan Ciidanka AMISOM oo taageeraya ciidamada dawlada taagta daran.
Goobaha dagaalku ka bilaabmay saaka ayaa meelihii bilihii lasoo dhaafay laysku horfadhiyay, waxaana weerarku ka bilaabmay halkaa. Kadib markii saaka ay weerar ku qaadeen Ciidamada AMISOM oo wata taangiyo ay goobaha difaaca xoogaga islaamiyiinta kaga jireen ee Wadada Makka Al Mukarama ee degmada Hodon magaalada Muqdisho.
Hugunka Madaafiicda Taangiga ka dhacday ayaa laga maqlayaa hareeraha suuqa Bakaaraha, waxaana xidhmay gebi ahaanba isu socodkii gaadiidka dadweynaha ee isaga kala gooshi jiray Bakaaraha ilaa iyo waaberi.
Madaafiic ay ciidanka AMISOM ku garaacayaan xaafada Muqdisho ayaa la maqlayaa ilaa iyo hadana si rasmi ah looma inta uu leegyahay khasaaraha shacabka kasoo gaadhay, isla markaana Goobaha dagaaladu ka socdaan oo ahaa meelihii inta badan ay dadku ka qaxeen.
Hase yeeshee wararka saacado ka dib kasoo baxay goobaha dagaalka oo aan war sugan laga hayn ayaa sheegaya inay jiraan khasaare dhimasho iyo dhaawac soo gaadhay labada dhinac ee dagaalku u dhexeeyo. iyadoo dhinaca kalena Khasaare weyni ka dhashay madaafiic culus oo ay ciidanka AMISOM ku garaaceen suuqa Bakaaraha magaalada Muqdisho. Iyadoo ay wararku sheegayaan in ilaa 50 Madfac ku dheceen gudaha suuqa Bakaaraha, kuwaas oo la sheegayo inay ilaa inta la ogayahay ku dhinteen 30 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 80 qof. Sida ay sheegayaan wararka laga helayo goobaha caafimaadka.
Mi ka mid ah dadkii xiligaa ku sugnaa suuqa Bakaaraha ayaa u sheegay shebekada araweelonews in madaafiicda kusoo dhacayay halkaa sida roobka usoo daadanayeen , isla markaana uu Indhihiisa saaray Maydadka 14 qof oo u badnaa dad danyar ah ee maqaaxiyo yar yar ku haysta hareeraha jidka laamiga ah ee agagaarka Wadada 2-aad ee Bakaaraha.
Kala soco wixii kasoo kordha dagaalka shebekada araweelonews.com